यो वर्षको प्राथमिकता शिक्षा र स्वास्थ्य-बुद्धशान्ति गाउँपालिका अध्यक्ष भुजेल::Hamrodamak.com
यो वर्षको प्राथमिकता शिक्षा र स्वास्थ्य-बुद्धशान्ति गाउँपालिका अध्यक्ष भुजेल
बुद्धशान्ति । संघीयता कार्यान्वयनका लागि ३ तह ( स्थानीय निकाय, प्रदेश र केन्द्र सरकार ) को निर्वाचन सम्पन्न भएर देश नयाँ स्वरुपबाट सवृद्धिको बाटोमा लम्किएको छ । केन्द्रीकृत शासन प्रणाली अव विकेन्द्रीकरणको माध्यमबाट सञ्चालन भएको छ । जनताको प्रत्यक्ष सरोकारका विषयदेखि शुक्ष्म र वृहत मानिने हरेक गतिविधि स्थानीय निकायबाट सम्भव भएको छ । जनताले प्रत्यक्ष अनुभुत गर्ने गरीका विकास निर्माणका गतिविधि देखिने क्रम पनि नेपालमा सुरु भएको छ । यद्यपी संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा भएकाले अझै पनि तीन तहकै संरचनामा केही कुरा सिकाइकै विषय बनिरहेको यथार्थ पनि छ । तर पनि स्थानीय निकायहरुले कार्यसम्पादन गरेको ९ महिनाको समयमा केही स्थानीय निकायले अल्पकालिन तथा दिर्घकालिन कार्यहरुमा गतिलै फड्को मारिसकेका छन् । स्थानीय निकाय अन्र्तगत बुद्धशान्ति गाउँपालिकाले ९ महिनाको अवधिमा अत्पकालिन तथा दिर्घकालिन योजनाका विषयमा गरेका कार्यहरुका विषयमा गाउँपालिका अध्यक्ष रमेश भुजेलसँग पूर्वेली साप्ताहिकका सम्पादक अनिल वाग्लेले गरेको कुराकानीको अंश सक्षेपमा …
रमेश भुजेल अध्यक्ष, बुद्धशान्ति गाउँपालिका
कार्यकाल सम्हालेको नौ महिनाको अवधिमा के–के कार्य भए ?
संघीयता कार्यान्वयनको चरण हो यो । जनताको काम गर्न हामी गम्भिर बनेर लागेका छौं । सेवा र विकासका कार्यलाई हामीले चुस्त ढंगबाट अगाडी बढाएका छौं । वितेको ९ महिनाको अवधिमा हामीले गाउँपालिकाबाट हुनेकार्यलाई सहज रुपमा सम्पन्न गर्ने प्रयत्न गर्यौं । यो समयलाई गाउँपालिका र वडाहरुले सिकाइको समयका रुपमा पनि लिनु पर्यो । तर पनि वर्ष २०७४ मा हामीले सडकको क्षेत्रमा बढी ध्यान केन्द्रीत गरेका थियौं । यस गाउँपालिका क्षेत्रका सडकहरुको स्तरउन्नती गर्नेकार्यलाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राख्यौं । सडक विस्तारको क्रममा नयाँ ट्याकहरु खोल्न सफल पनि भएका छौं । धेरै सडकहरुमा ए ग्रेडको ग्राभल भएको छ । ह्युमपाइप लगाउने, विजुलीका पोल नपुगेका ठाउँमा पु¥याउने कार्य भए । ठुटेवरबाट गौंडा, जोरकलशबाट डोरबहादुर काफ्लेको घरसम्म, कुरुंग खोलाबाठ ऐयावारी सम्म, भोटेटार क्षेत्रमा सडकको नयाँ ट्रयाक खोल्ने कार्य भएको छ । सडकको अवस्था राम्रो हुँदामात्र सहजता आउँछ भन्ने कुरालाई हामीले बुझेर नै सडक विस्तार र नयाँ ट्रयाक खोल्नेकुरालाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । अरु थप विकास निर्माणका कार्य र वडा तथा गाउँपालिकाबाट जनतालाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधालाई प्रभावकारी र सहज बनाउन हामीले ठूलै प्रयास गरेका छौं ।
यो वर्षमा चाहिँ खास के कार्य गर्ने सोच बनाउनु भएको छ ?
यो वर्ष हामीले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं । यो विषय जनताको आधारभुत कुरा हो । जव जनताको आधारभुत कुरा परिपुर्ति हुन्छ तव मात्र संवृद्धि छाउँछ । संवृद्धिका लागि यो वर्ष गाउँपालिकाले मुख्य गरी शिक्षा र स्वास्थ्यको पाटोमा महत्वपूर्ण कार्य गरेर उपलब्धि हात पार्ने लक्ष्य राखेको छ ।
क्षा र स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुभएको रहेछ, के– के कार्य हुन्छ त यी कुराहरुमा ?
पहिलो कुरा शिक्षा, यस विषयमा गाउँपालिकाले आगामी बजेटमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने सोच राखेको छ । सामुदायिक विद्यालयहरुको मोह सर्वसाधारणमा जगाउन र सामुदायिक विद्यालय प्रति अभिभावकको विश्वास पैदा गराउन सर्वप्रथप जरुरी छ । सामुदायिक विद्यालयलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित सबै पक्ष गम्भिर बन्न जरुरी छ । बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको तर्फबाट सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था माथि उठाउन महत्वपूर्ण पहलकदमी यो वर्ष हुनेछ । दरवन्दी कम भएका विद्यालयमा दरवन्दी थप गर्ने, शिक्षकको अभाव अझै रहे अस्थायी, करारमा शिक्षकको व्यवस्था गरेरै भएपनि शिक्षकको कमी हुन नदिने योजना छ हाम्रो । विद्यालयमा यसै वर्षबाट इलेक्ट्रोनिक मेसिनबाट शिक्षकको हाजिर गर्ने व्यवस्था गरिने छ । ११ र १२ को कक्षा पनि दिनमा नै सञ्चालन हुनेछन् । सामुदायिक विद्यालयहरुमा अंग्रेजी माध्यमलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य अघि बढाइनेछ । हामीले अव सामुदायिक विद्यालयहरुलाई निरन्तर निगरानीमा राख्नेछौं । हालै पनि हामीले छड्के अनुगमन गरेर सामुदायिक विद्यालयको अवस्था र शिक्षकको गतिविधि अध्ययन गरेका छौं । कमी कमजोरी भेटिएका ठाउँमा लिखित स्पष्टीकरण दिनु भनेर निर्देशन दिएका छौं । विद्यालय समयमा शिक्षक अनिवार्य रुपमा आएर पढाएकै हुनुपर्नेछ ।
अर्को तर्फ स्वास्थ्य, यो पक्षमा पनि हामी लागि परेका छौं । सरकारले निशुल्क वितरण गर्दै आएका औषधीको अभाव हुन नदिन हामी गम्भिर रुपमा लाग्छौं ।
गाउँपालिकाले स्वास्थ्यमा पनि प्रर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने सोच बनाएको छ । शान्तिनगरमा वर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा छ । यसलाई अझ स्तरीय बनाउन हामी लाग्छौं । गर्ववती महिलाहरुका लागि भिडियो एक्स–रेको व्यवस्था गाउँगाउँमा पु¥याउँछौं । समय निर्धारण गरेर भिडियो एक्स–रे मेसिन विभिन्न ठाउँमा लैजान्छौं, जहाँ जान्छ मेसिन त्यहाँका गर्भवती महिलाहरुले त्यहिँबाट सेवा लिन्छन् । स्वास्थ्य चौकीको अपग्रेड गर्ने कुरामा हाम्रो प्रयास जारी रहन्छ । स्वास्थ्य चौकीको सेवा थप प्रभावकारी बनाइन्छ ।
तपाईंले पदभार ग्रहण गरेपछि पहिलो निर्णयका रुपमा अस्पताल बनाउने भन्नेमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो त्यो काम चाहिँ कहाँ पुग्यो ?
हो, मैले पदभार ग्रहण गरे लगत्तै अस्पताल बनाउने कुरा समेटिएको पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थिँए । त्यो कार्य मेरो प्राथमिकताको विषय हो । जग्गा प्राप्त गर्ने चरणमा छौं । प्रर्याप्त जग्गा पाउने वित्तिकै २५ शैयाको अस्पताल निर्माण कार्य शुरु हुन्छ । जग्गा दिने केही जग्गादाता सम्पर्कमा आउँदै हुनुहुन्छ ।
पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको बुद्धशान्तिमा पर्यटन चाहि“ प्राथमिकतामा पर्दैन ?
पर्यटन हाम्रो प्राथमिकतामा नै परेको विषय हो । यसका लागि पनि हामीले गतिलै कार्य गरिसकेका छौं । चुनाव ताका एमालेले भनेको केवलकारको अवधारणालाई हामीले पनि राम्रो अवधारणाका रुपमा लिएर सो बारे कार्य थालिसकेका छौं । बुद्धशान्ति ६ को अचलेश्वर मन्दिरबाट रोङ गाउँपालिकाको पाथिभरासम्म पुग्ने केवलकारको फिजिवीलिटी अध्ययनको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । करीव १ अर्वको लागतमा त्यहाँ केवलकार निर्माण गर्न सकिने कुरा त्यो अध्ययनले देखाएको छ । त्यहाँवाट केवलकार सञ्चालन हुनसक्ने पुष्टि भएको छ । केवलकार निर्माणका लागि ठूलो लगानी कर्ताको आवश्यकता पर्नेहुँदा हामीले लगानी कर्ताको खोजी गरिरहेका छौं । ठुटेवरमा बन्छीजम्पको पनि यसैवर्ष डिपीआर तयार गर्नेछौं । त्यहाँबाट बन्छीजम्प गराउन सकिने कुरा आएको छ । त्यसलाई पनि हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौं । कमेरे माउन्टेन, भ्यू टावरको विकासमा पनि गाउँपालिकाले वजेट दिएको छ । वुद्धशान्ति ३ मा रहेको आदर्श नमुना सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा पनि गाउँपालिका लागेको छ ।
सरकारले तीन खम्बे अर्थनीति अवलम्बन गरेको छ, सरकारी, निजी र सहकारी । बुद्धशान्तिमा पनि धेरै सहकारी छन् यस विषयमा के तयारी छ ?
सहकारी पनि एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । यसका लागि पनि हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ । हामी सहकारी नियमावली चाँडै निकाल्दै छौं । यसले सहकारीको पाटोमा धेरै कुरा गर्छ ।
गाउँपालिकाले प्रदान गर्ने सेवा र दिने सुविधामा ढिलासुस्ती हुन्छ भन्ने जनताको गुनासो छ नि ?
हामीले चाहेर ढिलासुस्ती गरेकै छैन । जनताको सेवालाई चुस्त र छिटो बनाउन हामी लागि परेका छौं । केही कुराको पनि पकृया हुन्छ । ती पकृया त जनताले पूरा गर्नुपर्छ नि । हामी पनि नयाँ छौं, हामीले पनि धेरैकुरा सिकिरहेकै पनि छौं । यहाँबाट प्रदान गरिने सेवालाई छरितो पार्ने कार्य जारी छ । पहिले पनि सामाजिक कार्य गर्ने सामाजिक कार्यकर्तालाई भन्न चाहन्छु । जनप्रतिनिधि नहुँदा मानौं ५० हजारको कार्य गर्दा तपाईहरु कति रकम पाउनु हुन्थयो ? पूरै ५० हजारै पाइन्न थियो होला सायद । अहिले केही समय पखँदा पूरापूरी रकम पाउनु भएको छ नि होइन ?, आर्थिक पक्षमा हामीले निश्चित पकृया पूरा गर्ने पर्छ, त्यसका लागि केही समय लाग्न सक्छ । यसलाई अन्यथा मान्नु हुन्न ।
हामी कसैलाई भेदभाव नगरी सहज ढंगले सेवा प्रदान गर्ने कुरामा लागेका छौं ।
झापाको गौरादह खानेपानीमा नयाँ कार्यकालको लागी यही चैत्र १६ गते निर्वाचन हुन गइरहेको छ । आसन्न निर्वाचनमा लोकतात्रिक समुह र प्रगतिशिल समूह वीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । सचिवमा लोकतान्त्रिक समूहको तर्पmबाट...